I-SumoMe: Ukuhola Kwesizinda Sakho ... ngokuxhaswa Okukhulu | Martech Zone
I-SumoMe: Isizukulwane Esiholela Esizeni Sakho… Ngokusekelwa Okukhulu
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 21, 2015 NgoMsombuluko, Januwari 4, 2021 USean Sullivan
Bengisanda kufunda Iwebhusayithi kaJeff Goins futhi ngabona ukuhlanganiswa okumbalwa engingazange ngikubone nesiza sakhe se-WordPress. ngisebenzise I-WordPress Theme Search ukwenza ucwaningo oluthile. UJeff usebenzisa i-plugin ebizwa ngokuthi SumoMe yenziwe ngu I-AppSumo. Lapho ngihlola zonke izici zeSumoMe, ngahlabeka umxhwele.
Benginemibuzo ethile maqondana nama-plugins futhi ithimba le-SumoMe liphendule futhi layiphendula yonke ngosuku olufanayo. Kuhle ukubona lolo hlobo lokunakwa lusetshenziselwe insizakalo yamakhasimende epulatifomu.
I-SumoMe idale ukuwohloka okukhulu komkhiqizo futhi ingafakwa kuzingxenyekazi eziningi zohlelo lokulawulwa kokuqukethwe. Ukugxila okuyinhloko kwenkampani ngu isizukulwane esihola phambili sewebhusayithi. Le nkampani ikholelwa ekuthintekeni okuqondile. Ake ngidilize imikhiqizo yeSumoMe.
I-Smart Bar, Uhlu Lomakhi futhi Skrolela Ibhokisiyenza ukubhaliswa kwe-eNewsletter kubambe okulula futhi okungabonakali. ISumoMe isivele inikela ubufakazi bamakhasimende mayelana nokukhombisa imali yangempela yokuhola.
Kuholele siza ukwakha imikhankaso yakho ye-imeyili yokudonsa ngokunikeza izikhuthazi.
Izibalo Zokuqukethwe futhi Amamephu Okushisa nikeza ukuthi izivakashi zibheka kuphi futhi kanjani amakhasi aqondile kusayithi lakho. Futhi ungaguqula imikhankaso ngokuchofoza okukodwa.
Ungahlukıselana kwezenhlalo kuwebhusayithi yakho ngamakhono wedeskithophu neselula. Lokhu kufaka phakathi ukwabelana ngokuqukethwe ne- Highlighter futhi Isihlukanisi Sezithombe.
Ifomu lokuxhumana inikeza indlela elula yokuxhumana nenkampani.
ISumoMe inikela ngezinhlelo eziningi, kuya ngezidingo zakho kanye nesabelomali sakho, kufaka phakathi Ngamunye, uhlanganisiwe noPro. Funda kabanzi ukuthi kanjani I-SumoMe ka-AppSumo uhlelo lokusebenza lwenza amagagasi.
Ungayifaka Kanjani i-SumoMe WordPress Plugin
Uma uku-WordPress, ukufakwa kulula kakhulu njengoba iSumoMe isivele yathuthukisa i-plugin engalandwa futhi ifakwe. Nakhu ukuthi:
Tags: amafomu wokuxhumanaizibalo zokuqukethweimikhankaso yokudonsaokugqamileisithombe sabelanaukuhola isizukulwanelist umakhiumqulu webhokisiibha ehlakaniphileukwabelana komphakathisumo.meisamba
USean Sullivan ubungazwa e Guqula ikhofi. Lapho engeyona i-podcasting, ungathola uSean emicimbini yokuxhumana, imicimbi yamasiko, nasezitolo zekhofi ecaphuna ama-movie amaningi kakhulu.
Amasu Asikhombisa Aguqula Izinhlelo Zamaselula
Ngabe Imizamo Yokumaketha Ngaphandle Ingalinganiswa Kanjani?